Xanax® (ဇန်းနက်စ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Xanax® (ဇန်းနက်စ်)
Xanax® (ဇန်းနက်စ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Xanax® (ဇန်းနက်စ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Xanax® (ဇန်းနက်စ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ ထိန်းမရအောင်လန့်ခြင်း၊ စိတ်ကျခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအတွက် သုံးပါတယ်။
အထက်မှာမဖော်ပြခဲ့တဲ့ မပါတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
Xanax® (ဇန်းနက်စ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း ဆေးညွှန်းစာမှာပါတဲ့အတိုင်း တိတိကျကျအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ပိုသောက်တာလျော့သောက်တာ အချိန်ပိုသောက်တာတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ သင့်လက္ခဏာတွေကိုကုသရာမှာ ဆေးအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလို့ ယူဆရင် သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။
ဆေးကို ချေတာ၊ ၀ါးစားတာ၊ ပိုင်းတာမျိုးတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးတစ်ပြားလုံးကိုမျိုချရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိန်းမရအောင်လန့်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်းတွေကိုကုသရာမှာ ဆေးအလုပ်လုပ်ခြင်းရပ်သွားပြီလို့ယူဆရင် သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။
ရုတ်တရက်ကြီးမရပ်သင့်ပါဘူး။ မကောင်းတဲ့ဆေးရုတ်သိမ်းလိုက်တဲ့လက္ခဏာတွေ ရလာနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုစိတ်ချရစွာဆေးရပ်ရမလဲဆိုတာကို သင့်ဆရာဝန်ကို မေးပါ။
Xanax® (ဇန်းနက်စ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
စိုထိုင်းဆရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့ဝေးဝေး အခန်းအပူချိန်မှာထားသင့်အပါတယ်။ ဆေးမပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ဖို့ ရေချိုးခန်းရေခဲသေတ္တာစတာတွေထဲမှာ မသိမ်းသင့်ပါဘူး။ အမျိူးအစားပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ပုံစံတွေလည်း ကွဲနိုင်ပါတယ်။ ဆေးညွှန်းမှာပါတဲ့အတိုင်း သေချာသိမ်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးဝေးမှာ ထားသင့်ပါတယ်။ ရေမြောင်းတွေအိမ်သာစတာတွေထဲကို ညွှန်ထားထားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင် သွန်ပစ်ခြင်းမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ သတ်မှတ်ထားတဲ့အသုံးပြုနုိင်တဲ့နေ့ရက်ကျော်သွားပြီဆိုရင် သို့်မလိုအပ်တော့ဘူးဆိုရင် သေချစွန့်ပစ်သင့်ပါတယ်။ ဘယ်လိုစိတ်ချလက်ချစွန့်ပစ်နိုင်လဲဆိုတာတွေကို ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
Xanax® (ဇန်းနက်စ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓာတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
အကျင့်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အခြားလူတစ်ယောက်နဲ့ မျှဝေသုံးစွဲခြင်းတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ဆေးစွဲဖူးတဲ့လူတွေနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသူတွေမရယူနိုင်တဲ့နေရာမှာ ဆေးကိုထားသင့်ပါတယ်။ အကျင့်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဆေးတွေကို တလွဲအသုံးပြုမိခြင်းကြောင့် ဆေးစွဲခြင်း၊ အလွန်အကျွံသုံးစွဲမိခြင်း၊ သေဆုံးခြင်းကိုတောင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ရောင်းချခြင်း ပေးကမ်းခြင်းတွေက ဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Xanax® (ဇန်းနက်စ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Xanax® (ဇန်းနက်စ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဒီဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့် အောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိူးတွေ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
စိတ်ကျခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေချင်တဲ့ထိခိုက်နာကျင်စေလိုတဲ့ အတွေးများဖြစ်ပေါ်ခြင်း
ရင်တဒုန်းဒုန်းဆောင့်ခြင်း သို့ တလှပ်လှပ်ခုန်ခြင်း
ဓာတ်မတည့်တဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ မျက်နှာ၊နှူတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ လည်ချောင်းရောင်ခြင်းတွေ တွေ့ခဲံ့မယ်ဆိုရင် အရေးပေါ်အကူအညိချက်ချင်းယူသင့်ပါတယ်။
ဘယ်ဆေးတွေက Xanax® (ဇန်းနက်စ်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
Ritonavir or other medicines to treat HIV or AIDS
Antifungal medicine – fluconazole, voriconazole
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Xanax® (ဇန်းနက်စ်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Xanax® (ဇန်းနက်စ်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
ကျောက်ကပ်အသည်းရောဂါ (အထူးသဖြင့် အရက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသည်းရောဂါ)
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ သို့ အသက်ရှူခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ
စိတ်ကျခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေချင်တဲ့ထိခိုက်နာကျင်စေလိုတဲ့ အတွေးများဖြစ်ပေါ်ခြင်းရာဇ၀င်ရှိဖူးခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Xanax® (ဇန်းနက်စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရနိုင်သော ဆေးပြားပုံစံ၊ ပါးစပ်အတွင်းမှာပင် ပြိုကွဲသွားသောပုံစံ၊ အခဲသောက်ဆေးပုံစံ
ကနဦးပမာဏ -0.25 to 0.5 mg တစ်နေ့သုံးကြိမ် သောက်ရန် လိုအပ်မယ်သို့ ဆေးမတိုးတော့ဘူးဆိုရင် ၃နာရီ ၄နာရီတိုင်းမှာ တဖြည်းဖြည်းတိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်ထိန်းထားနိုင်ရန် ပမာဏ –4mgထိအများဆုံးအသုံးပြုနိုင်ပြီး ခွဲပေးနိင်ပါတယ်။
ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရေက်မှုရနိုင်သော ဆေးပြားပုံစံ၊ ပါးစပ်အတွင်းမှာပင် ပြိုကွဲသွားသောပုံစံ၊
ကနဦးပမာဏ – 0.5 mg တစ်နေ့သုံးကြိမ် သောက်ရန် လိုအပ်မယ်သို့ ဆေးမတိုးတော့ဘူးဆိုရင် ၃နာရီ ၄နာရီတိုင်းမှာ တဖြည်းဖြည်းတိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်ထိန်းထားနိုင်ရန် ပမာဏ – 1 to 10 mg အများဆုံးအသုံးပြုနိုင်ပြီး ခွဲပေးနိင်ပါတယ်။
ပျမ်းမျှပမာဏ – :5to6mg တစ်နေ့ ခွဲပေးနိုင်ပါတယ်။
ကနဦးပမာဏ – 0.5 to 1 mg တစ်နေ့တစ်ကြိမ် လိုအပ်မယ်သို့ ဆေးမတိုးတော့ဘူးဆိုရင် ၃နာရီ ၄နာရီတိုင်းမှာ 1 mgထက်မပိုပဲ တဖြည်းဖြည်းတိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်ထိန်းထားနိုင်ရန် ပမာဏ – 1 to 10 mg တစ်နေ့တစ်ကြိမ်
ပျမ်းမျှပမာဏ – : 3to6mg တစ်နေ့တစ်ကြိမ်
ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရေက်မှုရနိုင်သော ဆေးပြားပုံစံ၊ ပါးစပ်အတွင်းမှာပင် ပြိုကွဲသွားသောပုံစံ၊ အခဲသောက်ဆေးပုံစံ
ကနဦးပမာဏ – 0.5 mg တစ်နေ့သုံးကြိမ် သောက်ဆေး။ လိုအပ်မယ်သို့ ဆေးမတိုးတော့ဘူးဆိုရင် ၃ရက်၎ရက်တိုင်းမှာ 1 mgထက်မပိုပဲ တဖြည်းဖြည်းတိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
ပျမ်းမျှပမာဏ – :3mg သောက်ဆေးနေ့စဉ် ခွဲပေးနိုင်ပါတယ်။
အများဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည့်ပမာဏ – အများဆုံးအနေနဲ့ 4.5 mg သောက်ဆေးနေ့စဉ် ခွဲပေးနိင်ပါတယ်။
စိုးရိမ်ခြင်း – အသက်ကြီးသူများအတွက်
ကနဦးပမာဏ – 0.25 mg သောက်ဆေး တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်မှသုံးကြိမ် အသက်ကြီးသူတွေနဲ့ မစွမ်းဆောင်နိုင်သူတွေ သုံးနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်မယ်သို့ ဆေးမတိုးတော့ဘူးဆိုရင် ၃နာရီ ၄နာရီတိုင်းမှာ တဖြည်းဖြည်းတိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
အသက်ကြီးသူတွေမှာ benzodiazepines တုံ့ပြန်မှုများလာတဲ့အတွက်ကြောင့် Beers criteriaအတွက် နေ့စဉ်2mgထက်ပိုခြင်းက အသက်ကြီးသူတွေအတွက် မသင့်တော်ပါဘူး။ ပမာဏနည်းနည်းကပဲ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီး စိတ်ချရပါတယ်။ နေ့စဉ်အသုံးပြုသင့်တဲ့ပမာဏက ထောက်ခံထားတဲ့အများဆုံးပမာဏကို မကျော်သင့်ပါဘူး။
ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရေက်မှုရနိုင်သော ဆေးပြားပုံစံ၊ ပါးစပ်အတွင်းမှာပင် ပြိုကွဲသွားသောပုံစံ၊အခဲသောက်ဆေး
ကနဦးပမာဏ – 0.25 mg သောက်ဆေး တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်မှသုံးကြိမ် အသက်ကြီးသူတွေနဲ့ မစွမ်းဆောင်နိုင်သူတွေ သုံးနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်မယ်သို့ ဆေးမတိုးတော့ဘူးဆိုရင် တဖြည်းဖြည်းတိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
ကနဦးပမာဏ – 0.5mg တစ်နေ့တစ်ကြိမ် အထူးသဖြင့်မနက်ပိုင်း ။လိုအပ်မယ်သို့ ဆေးမတိုးတော့ဘူးဆိုရင် တဖြည်းဖြည်းတိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Xanax® (ဇန်းနက်စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးတွေအတွက် ပမာဏကိုသတ်မှတ်မထားပါဘူး။ ကလေးတွေအတွက် စိတ်မချရမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင်မှာ စိတ်ချရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည့်ပြည့်ဝဝနားလည်ထားသင့်ပါတယ်။ ပိုပြီးသိလိုတာတွေကို သင့်ဆရာဝန်တတ်ကျွမ်းနားလည်သူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Xanax® (ဇန်းနက်စ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ